Tanàna kilan’ny afo, 452 tafo potika, Malagasy 1998 tsy manankialofana [Ambohitranala, MD] – i am a malagasy in genève
28 octobre 2006 13 juin 2007
Tanàna kilan’ny afo, 452 tafo potika, Malagasy 1998 tsy manankialofana [Ambohitranala, MD]
« … Ny Alarobia 18 Oktobra 2006, tamin’ny 3 ora tolakandro, dia, main’ny afo tsy misy noraisina ny tanàna Ambohitranala, Kaominina Androrangavola, Distrika Marolambo [MD]. Trano miisa 452 tafo no potika, ary anisan’izany ny trano fiangonana F.L.M., izay eo akaikin’ny tanàna (trano mirefy 16M x 10M). Olona 1998 1993 no traboina, tsy manankialofana. Manao izao tatitra izao izahay mila vonjy aty aminareo … »
« … Mpanao ny tatitra : Botovary Tsarahoela, Chef de Fokontany, Ambohitranala | Mpanatrika manao sonia : Lesolo Rémi, Ben’ny tanàna Commune Rurale Androrangavola | Mpitan-tsoratra : Andrianarisolofo Fanomezana, Pastora FLM, Mpitondra Fileovana Androrangavola | natao teto Androrangavola ny 20 Oktobra 2006 … »
Vao voaraiko avy any Madagasikara dia izao ampitaiko etoana izao ity tatitra voina ity, mazava ho azy fa azoko antoka ny olona nampita ny vaovao.
1. Saro-dalana ny faritr’i Marolambo [fahalalana tsotsotra ny ahy] ka ara-dalàna ny roa andro nanaovan’ireo mpitondra hafatra ny elanelana fokontanin’Ambohitranala sy ny Commune Rurale Androrangavola.
2. Ny isan’ny velona no tanisain’ny mpitatitra fa ahiako ho maro ny namoy ny ainy tamin’ny ady amin’ny afo. Falafa ny ankamaroan’ny trano ary tsy misy fitaovana mahomby hiadiana amin’ny afo.
3. Manakaiky ny Fahavaratra sy ireo orana, ireo rivo-mahery, ireo làlana tapaka, ets … Fohy ny fotoana raha te hanao zavatra hoan’ireo velona.
Tsy mbola misy gazety Malagasy mitatitra ity voina ity, ka raha misy maheno vaovao fanampiny dia mba ampitao azafady.
Posté dans fanohananapar tomavana7 commentaires
7 réflexions sur “Tanàna kilan’ny afo, 452 tafo potika, Malagasy 1998 tsy manankialofana [Ambohitranala, MD]”
28 octobre 2006 à 09:22
Mampalahelo tokoa ity voina ity. Ary tsy nolazainy ve ny anton’ny niavian’ny loza ?
28 octobre 2006 à 10:50
Tsy milaza ny antony ilay tatitra nandalo teto ambany masoko. Ampitaiko arak’izany ihany izay vaovao azoko.
← 06|10|28 – Sady milanona no manampy ny samy Malagasy [Genève, CH]
Toeram-pitsaboana manaja mpiavy [CH] →